Virtual Office စင်ကာပူ
စင်္ကာပူရှိ Virtual Office
တတ်နိုင် Virtual ရုံး in စင္ကာပူႏုိင္ငံ သင့်ရဲ့အဘို့ virtual ရုံးလိပ်စာ စင်္ကာပူမှာ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကို virtual လိပ်စာ စင်္ကာပူမှာ, virtual ရုံးခန်း စင်္ကာပူမှာ, အွန်လိုင်းရုံး စင်္ကာပူမှာ, virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ စင်္ကာပူတွင်စင်္ကာပူမှ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည် ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး စင်္ကာပူမှာ။
Virtual ရုံး စင်္ကာပူတွင် Virtual ရုံးလိပ်စာ စင်္ကာပူတွင် စီးပွားရေးအတွက်စကားဝှက်လိပ်စာ စင်္ကာပူတွင် Virtual ရုံးခန်း စင်္ကာပူတွင် အွန်လိုင်း Virtual ရုံး စင်္ကာပူတွင် virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ စင်္ကာပူတွင် Virtual Workspace စင်္ကာပူမှာ။
ဘာကြောင့်စင်္ကာပူတွင် virtual office လိပ်စာရှိရမည်နည်း။
၎င်းသည်တစ်ကျွန်းတည်းမဟုတ်ဘဲကျွန်းပေါင်း ၆၄ ခုရှိသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူ၏areaရိယာသည်ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်ဝန်းရံနေသောကမ်းလွန်ကျွန်းပေါင်းခြောက်ဆယ်လေးခုအထိပါ ၀ င်ကြောင်းလူအနည်းငယ်သာသာသိကြသည်။ visitors ည့်သည်များအဘို့ဤသည်နေနှင့်ပိုပြီးနေရောင်ကိုဆိုလိုသည်။
၎င်းသည်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးညဥ့်ကူးတိရစ္ဆာန်ရုံ၏နေရာဖြစ်သည်၊ မြို့တွင်အခြားမည်သည့်နိုင်ငံမှလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောညအချိန်တွင်ကြုံတွေ့ရသောညအိပ်ယာယီ Safari ကိုပြသထားသည်။ ၎င်းသည်လူလုပ်ရေတံခွန်မြို့ကြီးအဖြစ်ကျော်ကြားပြီးအလွန်လှပသောပုံဖြစ်သည်။ ကျဆင်းနေသောမီတာ ၃၀ အမြင့်သည်ယနေ့အထိလူလုပ်အမြင့်ဆုံးရေတံခွန်ဖြစ်သည်။
စင်ကာပူသို့သွားရန်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးရေတံခွန်သို့မသွားဘဲသွားနိုင်သည်။ Jewel Changi လေဆိပ်၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရှုပ်ထွေးသောအဆောက်အအုံတွင်တည်ရှိသော HSBC Rain Vortex သည်မီတာ ၄၀ တွင်မြင့်တက်နေပြီးဥယျာဉ်အပြင်ဘက်ရှိစိမ်းလန်းစိုပြေသောဥယျာဉ်တစ်ခုတွင်ဝန်းရံထားသည်။ နိုင်ငံအများစုမှလူများသည်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောကြောင့်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်စင်္ကာပူတွင်လူတို့သည် Singlish ကိုပြောဆိုကြသည်။ ဤရောင်စုံဒေသဆိုင်ရာဘန်းစကားသည်စင်္ကာပူနိုင်ငံသားများ၏နေ့စဉ်စကားပြောဆိုမှု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
စတုရန်းကီလိုမီတာ ၇၀၀ ခန့်ရှိသောစင်္ကာပူ၏landရိယာ၏ထက်ဝက်နီးပါးသည်အစိမ်းရောင်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းခံရသည်။ အမျိုးမျိုးသောပန်းခြံများနှင့်ဥယျာဉ်များအပြင်အခြားနေရာများတွင်တွေ့ရှိရသည့်အပင်များရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပါ။ ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးအကြီးဆုံးကတော့ပွဲကျင်းပစရာတစ်ခုခုအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲ။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပွဲတော်များ၊ အဓိကအားကစားများ၊ အနုပညာပွဲများစွာရှိသည်။ မြို့တော်တွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးကျင်းပသောပွဲတော်များကိုသင်၏အမြစ်များနှင့်ဆက်နွှယ်နေရန်နှင့်အပြည့်အဝဖျော်ဖြေရန်ဖြစ်သည်။
စင်ကာပူသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသေးငယ်သော်လည်းစီးပွားရေးရှေ့တွင်ပြောဆိုခြင်းသည်စီးပွားရေးgရာမဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်မှ စ၍ စင်ကာပူသည်အရှေ့တောင်အာရှ၏ခေတ်သစ်မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မလေး၊ အာရပ်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့်အင်္ဂလိပ်ယဉ်ကျေးမှုများမှမြို့တော်သည်ဘာသာတရားနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကိုရောနှောပေါင်းစည်းထားသည်။
စင်္ကာပူသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးဖော်ပြချက်မှာမြို့ပြနိုင်ငံ၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်၏ကြီးမားသောမြို့ပြပြည်နယ်များကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မြင့်မားသောတည်ဆောက်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုမြင်နိုင်သောယဉ်ကျေးမှုကိုပေးသည်။ ၎င်းတွင်အရှေ့ပိုင်းပုံစံအေးဆေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်အနောက်ပုံစံပုံစံများကိုပေါင်းစပ်ထားပြီး hemisphereres နှစ်ခုလုံးတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လမ်းများတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ရာတွင်သင်အမှန်တကယ်လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုခံစားနိုင်သည့်ခေတ်မီသောမြို့တော်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အာရှစီးပွားရေးအချက်အချာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆိုထိရောက်သောစံနမူနာဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်မှစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာကိုဆွဲဆောင်သောကြောင့်ထိရောက်သောစီးပွားရေးမော်ဒယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ စင်္ကာပူတွင် Virtual Office ကိုတည်ထောင်ခြင်းသည်သင်၏ပုံရိပ်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ပုံသဏ္formsာန်ကိုဖော်ထုတ်သောကြောင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအများပြည်သူရှေ့ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ အစိုးရနှင့်လူအများပါ ၀ င်သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအမြောက်အများရှိသည့်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ရုံးခန်းသည်၎င်းအတွက်အလွန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ရုံးခန်းတစ်ခုရှိသည်ဆိုပါကသင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အရာမရှိပါ။ ကုမ္ပဏီ၏ရုံးချုပ်သည်လူအများမရရှိနိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောတည်နေရာ၊ ပုံနှင့်နေရာသည်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ သို့သော် virtual office သည်မည်သည့်စီးပွားရေးသမားမဆို၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်နိုင်သည့်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကြောင့်လိုအပ်သောတိုးပွားလာသောလိုအပ်ချက်နှင့်အတူ virtual virtual ဖြေရှင်းနည်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာသည်။
စင်္ကာပူရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာကဘာလဲ။
တစ်ဦးရှိခြင်းသည် စင်္ကာပူရှိ virtual ရုံး စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအရာများရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိပ်စာဟုလည်းလူသိများသောစင်္ကာပူ၏ virtual office သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားငှားရမ်းခြင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သို့မဟုတ်တည်နေရာအတွက်စျေးကြီးသောငှားရမ်းခမပေးရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ စင်္ကာပူရှိ Virtual Office သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးစင်္ကာပူရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင် virtual office Singapore သည်စင်္ကာပူရှိရိုးရာရုံးခန်းထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်စင်ကာပူရှိနာမည်ကြီးစီးပွားရေးလိပ်စာတစ်ခုအတွက်သင်ပေးဆောင်ရသည့်ကြီးမားသောငှားရမ်းခကိုမပေးဆောင်ဘဲ virtual office ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ စင်္ကာပူ၏ Virtual ရုံးသည်သင့်အားစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုအနိမ့်ကျသက်သာစေနိုင်သည်။ Virtual office space ကိုယူခြင်းအားဖြင့်စင်ကာပူသည် virtual office အနေဖြင့်သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရုံးခန်းသို့ပြောင်းစရာမလိုဘဲတိုးချဲ့နိုင်လိမ့်မည်။ Singapore Virtual ရုံးသည်စင်္ကာပူရှိရိုးရာစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်စင်ကာပူရှိရုံးခန်းလိပ်စာရှိခြင်း၏အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာသင်သည်စင်ကာပူရှိသင်၏ရုံးနေရာသို့မဟုတ်စင်္ကာပူရှိ Workspace တွင်ရရှိနိုင်သကဲ့သို့သင်လက်ခံရရှိနိုင်ခြင်းသည်စင်ကာပူရှိ Workspace သို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိရုံးနေရာများကဲ့သို့သင်၏ package များကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူရှိစာတိုက်မေးလ်များ၊ ဘယ်နေရာကိုမှပြောင်းရွှေ့စရာမလိုဘဲ၊ သင်၏အွန်လိုင်းစင်္ကာပူအတွက်ရုံးခန်းနှင့်လူများစွာသည်စင်ကာပူရှိရုံးခန်းများလိုအပ်သည်။ စင်ကာပူတွင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စင်ကာပူ၏ virtual office သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
စင်ကာပူရှိ Virtual Offices များသည်သင့်အားအပိုအားသာချက်များအနည်းငယ်ပေးသည်။
သင်၏ Virtual Office လိပ်စာသည်စင်ကာပူရှိအကျိုးရှိရှိနေရာတွင်တည်ရှိပြီးဖောက်သည်များအားရေရှည်စွဲမှတ်သွားစေနိုင်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစင်ကာပူရှိရုံးခန်းသည်ယနေ့တွင်အပြည့်အ ၀ တည်ဆောက်ပြီးသင်၏စီးပွားရေးအတွက်ချက်ချင်းအဆင်သင့်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင်၏ Virtual Office ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ စင်္ကာပူမှာ
စင်ကာပူရှိ Real Street Address
စင်ကာပူအတွက် Cloud Storage
Virtual Office အတွက်စင်ကာပူ၊
စင်ကာပူတွင်ပစ္စည်း ၂၀ အထိလက်ခံရရှိထားခြင်းမရှိပါ
စင်္ကာပူတွင်စာအိတ် ၁၀ စောင်အတွက်အခကြေးငွေမရှိပါ
ရက်ပေါင်း ၂၀ အထိစင်္ကာပူရှိစာတိုက်မေးလ်သိုလှောင်ခန်းကိုအခမဲ့
စင်္ကာပူရှိ Virtual ရုံးနေရာအတွက်သင်၏ Virtual ရုံးတည်နေရာ
စင်ကာပူရှိ Virtual Office အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Virtual ရုံးအတွက်အသုံးပြုခပိုယူသည် စင်္ကာပူမှာ
ရယူ စင်္ကာပူရှိ virtual ရုံးအပေါငျးတို့သသာယာအဆင်ပြေမှုများ စျေးသက်သာစျေးနှုန်းမှာ
ကန့်သတ် စင်္ကာပူ၊ စင်္ကာပူအတွက် virtual ရုံးအသုံးပြုမှုအကြောင်း။
စင်ကာပူ၊ စင်္ကာပူတို့၏ Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိကျွန်ုပ်တို့၏ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအောက်ဖော်ပြပါလူပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) စင်္ကာပူရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
စင်ကာပူ၊ စင်ကာပူအတွက် virtual office ၀ န်ဆောင်မှုများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
စင်္ကာပူ၊ စင်္ကာပူအတွက် virtual office ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) စင်္ကာပူမှသို့မဟုတ်သို့သွားသော၊
စင်္ကာပူ၊ စင်္ကာပူအတွက် virtual address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) လူမည်းများကိုစင်ကာပူဥပဒေအရစာရင်းသွင်းထားခြင်းမရှိပါ။
စင်ကာပူ၊ စင်္ကာပူအတွက် virtual office လိပ်စာအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Genetic ပစ္စည်းနှင့်စင်ကာပူမှသို့မဟုတ်စင်ကာပူသို့သွားသော Genetic ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
စင်္ကာပူ၊ စင်ကာပူအတွက်ဒီဂျစ်တယ် Workspace ၀ န်ဆောင်မှုများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစင်ကာပူရှိဒစ်ဂျစ်တယ် Workspace ဖြေရှင်းချက်အောက်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောအန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိသို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစင်ကာပူ၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း (များ) ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စင်ကာပူသည်။
စင်ကာပူ၊ စင်ကာပူအတွက် virtual po box ဝန်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုစင်္ကာပူရှိသို့မဟုတ်စင်္ကာပူရှိသို့မဟုတ်စင်ကာပူကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
အငှားမိဘစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်စင်္ကာပူအတွင်းမှသို့မဟုတ်စင်္ကာပူသို့ဖြစ်စေလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပုံစံများအပါအ ၀ င်စင်ကာပူ၊ စင်္ကာပူအတွက် virtual mailing address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်မပေးနိုင်ပါ။
စင်ကာပူ၊ စင်္ကာပူအတွက်ရုံးခန်းနေရာငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်စင်္ကာပူမှသို့မဟုတ်သို့သို့ ၀ င်သောဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်စင်ကာပူ၊ စင်ကာပူရှိစင်ကာပူ၊ စင်ကာပူအတွက်ရုံးခွဲများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုအတွက်စင်ကာပူရှိစင်ကာပူရှိစင်ကာပူရှိစင်ကာပူ၊ စင်ကာပူအတွက်အကောင်းဆုံး virtual address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးမထားပါ။
စင်ကာပူ၊ စင်ကာပူအတွက်ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်းအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်စင်္ကာပူမှသို့မဟုတ်စင်ကာပူသို့ရောင်းချခြင်းမပြုပါ။
ယနေ့စင်္ကာပူ၌သင်၏ virtual office ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရယူပါ။
virtual address ကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အရေးကြီးသောမှတ်စု စင်္ကာပူမှာ
virtual ရုံးမှန်ဆောင်မှုများ စင်္ကာပူမှာ
ကျနော်တို့စျေးသက်သာ ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများ in စင္ကာပူႏုိင္ငံအဖြစ်ကိုလည်းသိ ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ စင်္ကာပူမှာ, virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ, virtual ရုံးကုမ္ပဏီ စင်္ကာပူ, စာပို့ဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ, ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ, ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ, စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ, virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည် စင်ကာပူ၌, ငါတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက် စင်္ကာပူ, ကို virtual po box ကိုဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူ, ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူ, virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူ, ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု စင်ကာပူ၊ ဒီဟာငါတို့ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများ in စင္ကာပူႏုိင္ငံ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ စင်္ကာပူမှာ, virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ, ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ, စာပို့ဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ, ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု စင်ကာပူ၌, ငါတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက် စင်္ကာပူမှာ, စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ, ကို virtual PO box ကိုဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ, ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ, virtual ရုံးကုမ္ပဏီ စင်္ကာပူမှာ, virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ, virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည် စင်္ကာပူမှာ, ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ။ အဖြစ် ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး စင်္ကာပူမှာ။
Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ စင်္ကာပူတွင် Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ စင်္ကာပူမှာ
ပို၍ ထူးခြားသည် စင်္ကာပူရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများ
စင်ကာပူဈေးကွက်သို့ ၀ င်ခြင်းသည်စင်ကာပူရှိသင်၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူစျေးသို့ရောက်ရှိရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းမှာစင်ကာပူရှိအခွန်နှုန်းထားများကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကိုစင်ကာပူရှိဖြစ်သည်။ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့တင်သွင်းခြင်း / တင်ပို့ခြင်း၊ စင်ကာပူသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ စင်ကာပူရှိထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှင့်စင်ကာပူရှိ HR Consulting တို့၏ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့၏အကူအညီဖြင့်စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း။
NetherLands နှင့် US အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီ၏အထောက်အပံ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။ စင်္ကာပူရှိစင်ပေါ်ကော်ပိုရေးရှင်းလည်းဖြစ်သည် စင်ပေါ်ကုမ္ပဏီ စင်္ကာပူသို့မဟုတ်အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းစင်္ကာပူတွင်စင်ကာပူ၌တည်ရှိပြီးစင်ကာပူတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအိုမင်းခြင်းအတွက်“ စင်ပေါ်တင်ထားသည့်” ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ (နိုင်ငံတကာအလေ့အကျင့်) ။ စီးပွားရေးမရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
စင်္ကာပူတွင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ပထမခြေလှမ်းသည် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စင်္ကာပူတွင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည် သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း စင်္ကာပူမှာ။ ပထမ ဦး စွာ ကုမ္ပဏီ၏အမည်ရရှိနိုင်မှု စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်စစ်ဆေးပြီးကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည် သင်၏လုပ်ငန်းကိုစတင်ပါ စင်္ကာပူတွင်လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း စင်္ကာပူတွင်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် စင်္ကာပူမှာ, စီးပွားရေးဘဏ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း စင်္ကာပူတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်သောအခါလုပ်ရန်အရေးကြီးဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးဘဏ်အကောင့် စင်ကာပူမှာမင်းကမင်းအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္playsကနေပါဝင် startup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုစင်္ကာပူတွင်စာရင်းပြုရန်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စင်ကာပူရှိအခွန်အစီရင်ခံခြင်းနှင့်စင်ကာပူရှိသင်၏ကုမ္ပဏီအောက်ငွေသွင်းခြင်းများကိုရိုးရှင်းစေသည်။
စင်္ကာပူမှ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်၊ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း စင်္ကာပူမှတိုးတက်မှု၊ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် စင်ကာပူအပြင်ဘက်မှာမင်းရဲ့အဖြေကစင်ကာပူအပြင်ဘက်မှာတောင်ပံတွေဖြန့်ဖို့ကူညီနိုင်တယ်။ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ မင်းကိုစင်ကာပူလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ် သင်၏နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကိုစတင်ပါ စင်္ကာပူက
ဖွင့်လှစ် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် စင်္ကာပူကနေ
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစလုပ်ပါ စင်္ကာပူမှာရှာဖွေနေကြသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်၎င်းကိုဖွင့်ရန်လွယ်ကူသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် စင်္ကာပူက စင်္ကာပူတွင်စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုသင်စီစဉ်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပြသရန်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။
ကုန်သည်အကောင့် စင်ကာပူအတွက် ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာ စင်္ကာပူအတွက်
eCommerce ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် စင်္ကာပူအတွက်, All-In-One ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်း စင်္ကာပူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် နှင့် ကုန်သည်အကောင့် စင်္ကာပူမှာစတင်သည့်စီးပွားရေးအတွက်ရှုပ်ထွေးပုံရသော်လည်းမလွယ်ကူပါ။ စင်ကာပူအတွက်ငွေပေးချေရန်ဂိတ်တံခါး၊ စင်ကာပူငွေပေးချေသည့်စနစ်နှင့်ကုန်သည်အကောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ် စင်ကာပူမှာဆိုရင်မင်းကမင်းပဲ eCommerce ကုန်သည် စင်္ကာပူမှာ
ကျော်စင်ကာပူငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် 170 နိုင်ငံများ
စင်ကာပူရှိကုန်သည်စာရင်း ငွေကြေး ၂၀၀ လက်ခံပါ
ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပါ ထက်ပိုမိုထံမှစင်္ကာပူ၌တည်၏ 300 ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကိုဝယ်ပါ စင်္ကာပူမှ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်ပါ Singapore.To ၌တည်၏ စီးပွားရေးစတင်ပါ စင်္ကာပူတွင်စင်္ကာပူရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းကိုလည်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
စီးပွားရေးရောင်းအား စင်္ကာပူတွင်လူတစ် ဦး သည်စင်္ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်သည် (သို့) စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်သည်။
သငျ့လျြောသော ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ စင်ကာပူမှာစီးပွားရေးမရောင်းခင်လုပ်ရ ဦး မယ်။ ပါတီများက ၀ င်ရောက်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုသတိပြုရမည် စီးပွားရေးရောင်းချခြင်း စင်ကာပူနှင့်နောက်ကွယ်မှဥပဒေရေးရာသက်ရောက်မှုတွေ။
အကောင့်များ Outsourcing စင်္ကာပူမှာ
အကောင့်များ outsourcing ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်စင်ကာပူရှိလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ စင်္ကာပူတွင်ပေးသောအကောင့်ပြင်ပ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အားမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန်စင်္ကာပူရှိဘဏ္indicatorsာရေးညွန်းကိန်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
- စာရင်းကိုင်ဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူမှာ
စင်ကာပူတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်စင်ကာပူနိုင်ငံမှငွေကြေးဆိုင်ရာလိုင်စင်ရယူခြင်းသို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်ကမ်းလွန်လိုင်စင်၊ Crypto လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ICO လိုင်စင်သို့မဟုတ်တရား ၀ င်တရားစီရင်မှုမှစင်ကာပူမှလောင်းကစားလုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သည်။
Virtual Number (VoIP) စင်္ကာပူအတွက်
VoIP ကမ်းလှမ်းသောဝန်ဆောင်မှုများ ဘို့ နှစ်ခုလုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စင်ကာပူနှင့်လူနေအိမ် VoIP တို့ဖြစ်သည်။
Virtual နံပါတ် စင်္ကာပူ 89 နိုင်ငံများ | 290 အမြို့မြို့
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်စင်ကာပူ၌ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်နေရာ၌ဖြစ်စေ၊ သင့်လုပ်ငန်းအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကောင်း စင်္ကာပူ (သို့) တခြားနေရာတွေမှာမင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာရှိနေခြင်းကပျောက်နေတယ်။
စင်္ကာပူတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ HR ကိုစင်္ကာပူတွင်အမှုဆောင်ရှာဖွေပါ စင်္ကာပူအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများ, အခွက်တဆယ်ဝယ်ယူမှု စင်ကာပူရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စုဆောင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို outsourcing စင်ကာပူရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) စင်ကာပူအတွက်အလုပ်ခွင်တွင်လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်
စင်္ကာပူရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များအတိုင်ပင်ခံ (HR) ပေါင်းအခမဲ့ယောဘသည် Portal ကို စင်္ကာပူကိုသွားခွင့်
Talent Acquisition စင်္ကာပူမှာ
Talent Acquisition သည်စင်ကာပူရှိသင်၏စီးပွားရေးအတွက်အဆင့် (၃) ဆင့်ပါ ၀ င်သည့်ဘက်စုံဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်။
- စုဆောင်းသည် စင်္ကာပူ၌သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
- ရွေးချယ်ပါ စင်္ကာပူ၌သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
- ဘော်ဒါတွင် စင်္ကာပူ၌သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် Talent Acquisition စင်ကာပူနိုင်ငံသည်စင်ကာပူတွင်ရာထူးနေရာများစွာထက်ကျော်လွန်နေရမည်ဖြစ်သော်လည်းစင်ကာပူရှိသင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီစေရန်ကူညီနိုင်မည့်စင်ကာပူနိုင်ငံမှဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာမှဖြစ်စေစင်္ကာပူအတွက်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်မဟာဗျူဟာအရဆွဲဆောင်ခြင်း၊
စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် Outsourcing စင်္ကာပူမှာ (RPO)
ကျနော်တို့ပေး စုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုပြင်ပ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရန်စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ဝန်ဆောင်မှု။
RPO ပံ့ပိုးပေး စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်လည်းလူသိများသည့် Recruiting Process Outsourcing provider သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်တိုးချဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည် HR စင်္ကာပူတွင်ဘက်စုံငှားရမ်းခြင်းအဖြေကိုပေးသည်။ စင်ကာပူရှိ RPO ပံ့ပိုးသူသည်စင်ကာပူရှိလိုအပ်သော ၀ န်ထမ်းများ၊ သင်၏ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်စင်ကာပူတွင်သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်သောနည်းပညာနှင့်နည်းစနစ်များကိုပေးနိုင်သည်။
(ဒီတစ်ခုအဘို့ဖြစ်၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စင်ကာပူမှာအမှန်တကယ်ရှာနေတာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ စင်္ကာပူတွင်)
အကယ်၍ သင်သည်စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်အလုပ်အကိုင်နေရာ၊ စင်ကာပူတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောအလုပ်များ၊ စင်ကာပူရှိအိုင်တီအလုပ်များ၊ စင်ကာပူရှိအလုပ်အကိုင်များ၊ စင်ကာပူရှိလုံခြုံရေးအလုပ်များ၊ စင်ကာပူရှိရောင်းအားအလုပ်များ၊ စင်္ကာပူ၊ စင်ကာပူရှိရာသီအလိုက်အလုပ်သမားများ၊ စင်ကာပူရှိအလုပ်အကိုင်များ၊ စင်္ကာပူတွင်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ၊ စင်ကာပူရှိ web ဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ်များ၊
ကျွန်ုပ်တို့တွင်စင်္ကာပူ၌အလုပ်ရှာဖွေသည့်ဆိုဒ်များရှိပြီးစင်ကာပူနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာ ၁၀၆ ခုတွင်အလုပ်ရှာရန်အထောက်အကူပြုသည်
HR မှအတိုင်ပင်ခံသည်စင်္ကာပူတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံရန်အတွက်များစွာကူညီနိုင်သည်။
လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် အတိုင်ပင်ခံ ကျွန်ုပ်တို့မှထောက်ပံ့ပေးသည်စင်ကာပူတွင်သင်၏ HR အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက်အထူးအလုပ်ဖြစ်သောစင်္ကာပူတွင် HR လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
- နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၅ နိုင်ငံနှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံ - နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိသည်။
အကောင်းဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ HR အလေ့အကျင့် စင်္ကာပူတွင်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
အတူအတွေ့အကြုံကို စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြား စင်္ကာပူမှာ။
ထုတ်လုပ်သူသန်းသန်းပေးသည် အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး စင်ကာပူရှိစီမံခန့်ခွဲရေး ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှု ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်စင်ကာပူရှိအကောင်းဆုံးရှာဖွေရန်ကတိက ၀ တ်ဖြင့်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေးအတွက်စင်ကာပူတွင်အကြံပေးခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည် အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး စင်ကာပူနှင့်နိုင်ငံတကာမှဒါရိုက်တာမှစင်ကာပူအတွက်“ C” suite level အထိ။ သင်၏လျှို့ဝှက်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်စင်္ကာပူကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောစင်္ကာပူနိုင်ငံ၏အကြီးတန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
တကယ်ပါပဲအကယ်၍ သင်သည်စင်ကာပူတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့လျှင်အောင်မြင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်စင်္ကာပူတွင်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိအလုပ်ရှင်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအခမဲ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိကျွန်ုပ်တို့၏ HR Consulting ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်စင်ကာပူရှိ ၀ န်ထမ်းများကိုငှားရမ်းရန်သင့်အားကူညီရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ သို့မှသာစင်ကာပူရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
စင်္ကာပူတွင်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိအကြံပေးခြင်း၊ စင်ကာပူရှိပစ္စည်းကိရိယာဆိုင်ရာငွေကြေး၊
အကူအညီလိုလျှင်စင်ကာပူတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိထူထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခြင်း ဘဏ္licensာရေးလိုင်စင် စင်ကာပူမှ အီးယူသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်လိုင်စင် ဘို့ ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် စင်္ကာပူမှ, Crypto ဖလှယ်ခွင့်လိုင်စင် နှင့် ICO သို့မဟုတ် လောင်းကစားလိုင်စင် အမျိုးမျိုးသောတရားစီရင်မှုအတွက်စင်္ကာပူကနေ။
- လုပ်ငန်းလိုင်စင် စင်္ကာပူကနေ
- ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင် စင်္ကာပူကနေ
- ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် စင်္ကာပူကနေ
- Crypto Exchange လိုင်စင် စင်္ကာပူကနေ
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင် စင်္ကာပူကနေ
- လောင်းကစားလိုင်စင် စင်္ကာပူကနေ
- ငွေပေးချေမှုကြားခံ စင်္ကာပူမှလိုင်စင်
စင်္ကာပူတွင်လည်ပတ်မည့်မြို့တော် = စင်္ကာပူရှိလက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများ - စင်ကာပူရှိလက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရား
ဘို့ လည်ပတ်ငွေကြေး စင်္ကာပူတွင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဝယ်ယူ စင်္ကာပူတွင်ကြွေးရှင်များ၊ စင်ကာပူရှိအခွန်အခများနှင့်စင်ကာပူဈေးကွက်၏စျေးနှုန်းအရ ၀ ယ်ယူစျေးနှုန်းများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ၊ အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ဘို့ စင်္ကာပူ၌စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ စင်္ကာပူရှိ Due Diligence နှင့်ဆက်စပ်သောသင်လုပ်နိုင်သည်။
ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေး စင်္ကာပူတွင်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်အတွက်စင်ကာပူရှိပစ္စည်းအသစ်များအတွက် ၁၀၀% ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသည်
စင်္ကာပူရှိပစ္စည်းငွေကြေးအတွက် - ပိုသိကြ ဆက်သွယ်ရန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလှည့်ကျအတိုင်ပင်ခံ စင်္ကာပူတွင်အမြတ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းအတွက်စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြောင်းလဲရန်ကူညီသည်။ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ငွေသားစီးဆင်းမှုစသဖြင့်။ စင်္ကာပူရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအသုံးပြုသည် န်ဆောင်မှုများလှည့် စီးပွားရေးတိုးတက်စေရန်စင်္ကာပူတွင်။
စင်္ကာပူမှဖောက်သည်များအားအိုင်တီဝန်ဆောင်မှုများပေးသည်။ web development စင်္ကာပူမှာ, eCommerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စင်္ကာပူမှာ, blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ စင်္ကာပူမှာ, software development စင်္ကာပူမှာ, မိုဘိုင်း app ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စင်္ကာပူမှာလည်းလူသိများ မိုဘိုင်း application ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စင်္ကာပူမှာ, ဝဘ်ဒီဇိုင်း စင်ကာပူ၊ ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ငါတို့သည်လည်းအခမဲ့ပေး: စင်ကာပူရှိ software နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ စင်ကာပူရှိ Web development consultations၊ စင်ကာပူရှိ Blockchain နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း။
စျေးနှုန်းချိုသာသော Web Designing Company ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံ
စင်ကာပူရှိဝက်ဘ်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ စင်ကာပူရှိ Client`s အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ပေးသည်မှာ Corporate, Responsive နှင့် SEO Optimized ဖြစ်သည်
စျေးနှုန်းချိုသာသော Web Development
စင်ကာပူရှိ Web Development Company နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အရည်အသွေး၏။
Affordable App Development ကိုစင်္ကာပူတွင်
351+ ကျော်သောအက်ပ်များ နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်။ စင်္ကာပူရှိ App Development ကုမ္ပဏီ.
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စင်္ကာပူရှိကုန်ပစ္စည်းများ - သင်၏အွန်လိုင်းတိုးတက်မှုနှင့်စင်ကာပူနှင့်နိုင်ငံတကာတွင် ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်အတွက်။
စျေးနှုန်းချိုသာသော software ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်တည်ဆောက်သည်
စင်ကာပူရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ ဖွံ့ဖြိုးမှု, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် devOps များအတွက်တိုင်ပင်။
စိတ်ကြိုက် စင်္ကာပူရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလသင့်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း။
စင်ကာပူတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစင်္ကာပူတွင်တိုးချဲ့ခြင်း၊ သင်သည်စင်ကာပူတွင်ရုံးခန်းသို့မဟုတ်အိမ်တစ်လုံးငှားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ပေါ်တယ်စင်ကာပူအိမ်ခြံမြေလိုအပ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စင်ကာပူရှိအိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များနှင့်သို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိအိမ်ခြံမြေပွဲစားများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
စင်ကာပူရှိအိမ်ခြံမြေတစ်ခုကိုဝယ်ယူရောင်းချခြင်း။ ငါတို့ကြိုးစားကြည့်ပါ အခမဲ့အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ် စင်္ကာပူမှာ။ ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း
စင်ကာပူမှာတိုက်ခန်းငှားချင်တယ်။ အခမဲ့အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ် စင်္ကာပူမှာ။ စင်ကာပူတွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
စင်္ကာပူတွင်စိုက်ပျိုးမြေများကိုရှာဖွေခြင်း၊ နောက်ထပ်မရှာပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စင်္ကာပူ၏အခမဲ့အိမ်ခြံမြေစာရင်းများကိုအသုံးပြုပါ။
စင်ကာပူသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းစင်ကာပူတွင်သင်လိုချင်တာကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစင်္ကာပူအတွက်အသုံးပြုသည်။ သင်လိုချင်တာအားလုံး၊ လိုချင်တာ!
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Classified Services
စင်္ကာပူတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးကိုစင်္ကာပူတွင်တိုးချဲ့ပါ၊ စင်ကာပူရှိရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊ စင်္ကာပူရှိလက်ပ်တော့များ၊ စင်ကာပူရှိသင်၏တိုက်ခန်းအတွက်ပရိဘောဂများလိုအပ်နိုင်သည်၊ စင်ကာပူတွင်သေးငယ်သောအရာများစွာရှိသည်။ နှင့်နိုင်ငံပေါင်း 105 ။
စင်္ကာပူအတွက်အခမဲ့ Classified န်ဆောင်မှု
သင်၏စီးပွားရေးအသစ်အတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ၀ ယ်ရန်အိုင်တီပစ္စည်းများကိုရှာဖွေခြင်း။
စင်္ကာပူတွင်အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများကိုစင်ကာပူရှိကော်ဖီထုတ်လုပ်သည့်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ် Owen ကဲ့သို့ရှာဖွေပါ။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု
Legal အတွက်စင်ကာပူရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေကိုဆက်သွယ်ပါ စင်္ကာပူတွင်နေထိုင်ခွင့် .
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - စင်ကာပူရှိ Virtual Office
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်များဖြစ်သောစင်္ကာပူ Virtual Office Address တွင်စာတိုက်နှင့်စာတိုက်များကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့သင်လုပ်နိုင်သည် - သင်၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်စင်္ကာပူ Virtual ရုံးအကောင့်၏ post-box ချိန်ညှိချက်များတွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးအမည်နှစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့မှသာစာတိုက်နှင့်စာတိုက်နှစ်ခုစလုံးကို Virtual Office Address ရှိအမည်များအောက်တွင်လက်ခံရရှိနိုင်သည်။ စင်္ကာပူ။
Virtual office Singapore Virtual office Singapore
စင်ကာပူ၏ Virtual ရုံးလိပ်စာသည်ကမ်းခြေရှိစာတိုက်ပုံးတစ်ခုလား။
ဖော်ပြခဲ့သောတည်နေရာအတွက်စင်ကာပူရှိ Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုသည်စင်ကာပူရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့မှစီမံခန့်ခွဲထားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာဖြစ်ပြီးသင်၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထုပ်များကိုစင်ကာပူရှိရုံးခန်းနေရာများတွင်လက်ခံရရှိသည်။
စင်္ကာပူရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ စင်္ကာပူရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
စင်ကာပူရှိ virtual office လိပ်စာများကိုလက်ခံရရှိထားသောစာတိုက်နှင့်စာတိုက်ပုံးများကိုလိပ်စာများစွာသို့ပို့လို့ရသလား။
စင်္ကာပူရှိ Virtual Address စင်္ကာပူရှိ Virtual Address
ကျွန်ုပ်၏စင်္ကာပူ Virtual Office လိပ်စာသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်၏စာပို့လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
သင်၏စာ (သို့) အထုပ်တစ်ခုခုသည်စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိပ်စာသို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းတို့ကိုဒီဂျစ်တယ်ပြောင်း။ စင်ကာပူအတွက် virtual mailbox မှတစ်ဆင့်သင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်ရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုဖွင့်ရန်၊ စကင်လုပ်ရန်၊ ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်လွှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်သည်။
စင်္ကာပူရှိ Virtual Business Address | စင်္ကာပူရှိ Virtual Business Address
စင်္ကာပူရှိ Virtual Business လိပ်စာသည်စင်ကာပူတွင်ရှိနေလိုသောမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုသွားရန်ကောင်းသည်။ သင်၏တည်ရှိမှုအတွက်စင်ကာပူရှိသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်အချိန်နှင့်ငွေအမြောက်အများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုပဲသင်၏စီးပွားရေးကိုစင်္ကာပူတွင်တိုးချဲ့ရန်သင့်ဆန္ဒအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
စင်္ကာပူရှိ Virtual ရုံးခန်း စင်္ကာပူရှိ Virtual ရုံးခန်း
စင်ကာပူရှိ virtual PO box သို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိ virtual mail လိပ်စာသို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိ virtual office works များအတွက်အပို ၀ န်ဆောင်ခအတွက်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်တွေကဘာလဲ။
စင်ကာပူတွင် virtual mail လိပ်စာသို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိ virtual PO box သို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိ virtual office works များကိုဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာသောမူဝါဒနှင့်လစဉ်ကြေးများရှိသည်။ ၎င်းကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစင်္ကာပူရှိ virtual office ဟုခေါ်ပြီးသင်ရွေးချယ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စံအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောအပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုမရွေးချယ်မီအခြေအနေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအမြဲတမ်းအသိပေးပါ။
စင်္ကာပူအတွက် Virtual Office Workspace | စင်္ကာပူအတွက် Virtual စာတိုက်လိပ်စာ | စင်္ကာပူအတွက် Virtual PO box
စင်္ကာပူရှိ virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခြားအမည်များကဘာတွေလဲ။
စင်ကာပူရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လူတို့နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအမည်များမှာစင်ကာပူရှိ virtual ရုံးများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများ၊ စင်ကာပူရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စင်္ကာပူရှိ digital workspace solution များ၊ စင်ကာပူရှိ virtual ရုံးလိပ်စာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စင်ကာပူရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှု၊ စင်ကာပူရှိ virtual address service၊ စင်ကာပူရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ စင်ကာပူရှိ digital workspace ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စင်ကာပူရှိ virtual office ကုမ္ပဏီ၊ စင်ကာပူရှိ virtual mailbox ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စင်ကာပူရှိငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စင်္ကာပူရှိစာပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှု၊ စင်ကာပူရှိစာတိုက်ပုံးစာပို့ဝန်ဆောင်မှု၊ စင်ကာပူရှိ virtual စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု၊ စင်ကာပူရှိရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ စင်ကာပူရှိစာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု။
စင်ကာပူ virtual ရုံးနှင့်အခြားနိုင်ငံများကိုမှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
စင်ကာပူအပါအ ၀ င်နိုင်ငံတိုင်းသည်စင်ကာပူသို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများတွင်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာအဖြစ် virtual office ကိုအသုံးပြုရန်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ရှင်းလင်းချက်အတွက်ထိတွေ့ရယူပါ။
စင်္ကာပူရှိ Virtual စာတိုက်လိပ်စာ စင်္ကာပူရှိ Virtual Office Mailing Address စင်ကာပူတွင်စာပို့ခြင်း စင်္ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာ
စင်္ကာပူရှိ Startup များအတွက်အထူးပံ့ပိုးမှု
စင်္ကာပူရှိ One Stop Shop
စင်္ကာပူတွင် Tailor Made ချဉ်းကပ်နည်း
စင်္ကာပူတွင် Hand Holding
Client Acquisition Support စင်ကာပူနိုင်ငံ
ဘို့ နောက်ဆုံးပေါ်စင်ကာပူစီးပွားရေးသတင်း စင်္ကာပူ၊ စင်ကာပူစီးပွားရေးဥပဒေများစတင်ရန် စီးပွားရေးသတင်း, စီးပွားရေးသတင်းစင်ကာပူ, နောက်ဆုံးပေါ်စင်ကာပူစီးပွားရေးသတင်း စင်္ကာပူ၊ စင်္ကာပူတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန် စီးပွားရေးဥပဒေ, စင်ကာပူ စီးပွားရေးဥပဒေများ, စီးပွားရေးဥပဒေ စင်္ကာပူ, စီးပွားရေးဥပဒေများ စင်္ကာပူ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ စင်္ကာပူ, စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အသစ်များ စင်္ကာပူ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူး စင်္ကာပူ၊ စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အသစ်စင်္ကာပူ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ, စင်္ကာပူ နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ, နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ စင်္ကာပူ၊ စင်္ကာပူစီးပွားရေးဥပဒေသစ်များ နောက်ဆုံးသတင်းများ, စင်္ကာပူ၏နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအသစ်များ, စင်္ကာပူ၏နောက်ဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ, နောက်ဆုံးပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများစင်္ကာပူ, အသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစင်္ကာပူစည်းမျဉ်းများအသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်း စင္ကာပူႏုိင္ငံ, စင်္ကာပူစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံ, အသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစင်္ကာပူစည်းမျဉ်းများစင်ကာပူ၊ စီးပွားရေးဆောင်းပါး စီးပွားရေးဆောင်းပါး, စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်စင်ကာပူ၊ စတင်တည်ထောင်သည် စင်္ကာပူ, စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်သစ် စင်ကာပူ၊ စီးပွားရေးသတင်း, စီးပွားရေးသတင်း စင်္ကာပူ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်းပါးများ စင်ကာပူ၊ စင်္ကာပူစီးပွားရေးဆောင်းပါးများ၊ စင်္ကာပူစီးပွားရေးသတင်းများ၊ စင်္ကာပူ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစင်္ကာပူကို update, စင်္ကာပူ စတင်တည်ထောင်သည်စင်္ကာပူမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမည်သို့စတင်မည်၊ စင်္ကာပူမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်သည့်သတင်း စတင်ရန်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေး စင်ကာပူတွင် update စီးပွားရေးအစီအစဉ် သတင်းစင်ကာပူ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း စင်ကာပူအတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အသေးစားစီးပွားရေး သတင်းစင်ကာပူ၊ စင်ကာပူအသေးစားစီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးသတင်း စင်္ကာပူ, စီးပွားရေးဝဘ်ဆိုက် စင်္ကာပူ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စင်္ကာပူမှာ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စင်္ကာပူ၊ စင်ကာပူစီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စင်ကာပူ၊ စင်ကာပူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။